Ukhetha bani: Ubuntu, Debian, noma bobabili? | Kusuka kuLinux
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ukusatshalaliswa, I-GNU / Linux
nge RSS, ngendatshana eku- I-Com-SL Ngithola ngocwaningo olwenziwa esithangamini I-Linux Mint nomphumela kabani (Kuze kube manje) Ngikhombisa ngezansi.
Angazi ukuthi le nhlolovo izosiza kangakanani, ikakhulukazi njengoba ingazange iqalwe yinoma yiliphi iqembu leqembu lentuthuko I-Linux Mint, kodwa imiphumela kuze kube manje ayimangazi. Futhi bengingeke ngimangale uma ibhekelwa yinoma yiliphi ilungu le- Team de I-Linux Mint.
Ngihlale ngisho njalo I-LMDE ithola indawo ebalulekile ku- Umphakathi I-Linux Mint futhi bekungeke kungimangaze uma kwesinye isikhathi, esikhathini esizayo esiseduze, kuzoba ngundabuzekwayo walokhu kusatshalaliswa.
Ngivotele Debian, njengoba kunengqondo futhi izizathu zami sezibazi abaningi. Yimuphi ongamvotela? Nayi ifayili le- isixhumanisi senhlolovo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ukhetha bani: Ubuntu, Debian, noma bobabili?
Yini elindelwe ku-distro iyehluka ngokuya ngokusetshenziswa okuzokwenziwa ngayo, njengama-distros ezethulo emhlabeni Gnu-linux engingakhetha iMint ngokususelwa ku-Debian, uma ngokuhamba kwesikhathi kuvela ukuthi i-linux iyakukholisa futhi uyayithanda, nginganikeza Ngidlulela ku-Debian Testing yedeskithophu distro.
Siyabonga ngezindatshana ¡¡¡ukubingelela
Kuncane okwenzeka kimi. Ngifaka i-LMDE kepha ngihlala ngigcina ngifaka kabusha nge-Debian emsulwa futhi akukho makeup. 😀
"Elementary Watson wami othandekayo" Debian wawo wonke umuntu.
Angazi nokuthi ngifunani hahahaha
Ngefilosofi nenhlonipho ngivotela i-GNU / Linux Debian (ikakhulukazi yamaseva) kepha njengomsebenzisi wokugcina we-Ubuntu. Yebo, inhlolovo inzima futhi manje ngisebenzisa Ubuntu + Xfce4 😀
Ngiyakutshela ukuthi uma usukwazi kahle i-GNU / Linux, noma yimuphi umsebenzisi wokugcina angenza iDebian njengoba uNkulunkulu ayehlose futhi engenalutho lokufisa Ubuntu, noma okungcono, asebenzise i-LMDE, ikakhulukazi ngeXfce ...
Njengomsebenzisi wokugcina, ngigcizelela ukuthi ubuntu benza umsebenzi wethu ube lula, kusukela ekufakweni kwabashayeli kuya endleleni yokusebenzisa; manje uma sikhuluma ngomsebenzisi onolwazi olumaphakathi, yebo, i-debian kungaba ukukhetha okufanele kakhulu.
Ngincome okungenhla kubangani nomndeni wami, kepha ngokwami ​​ngiyaqhubeka nobuntu, lapho ukufaka kushesha kakhulu ukukusebenzisa, khumbula ukuthi ku-debian kuhlale kunesikhathi sokusebenzisa i-terminal imizuzu embalwa eyengeziwe .
U-Irwin Manuel Boom Gamez kusho
U-Debian uqinisekile, iMint yenza umsebenzi omuhle nge-LMDE, kepha ingabe i-debian version 7 izoyisusa i-LMDE?
Phendula u-Irwin Manuel Boom Gamez
Ngiyaluqonda umbono wakho futhi kuyathakazelisa kakhulu. Kepha nge-Debian kwenzeka okuthile okufuna ukwazi, futhi kuyinto ebonakala kimi, inomthelela omkhulu eqinisweni lokuthi akuyona enye yezinto ezithandwa kakhulu ngumsebenzisi wokugcina: UDebian akapholisi ukubonakala kweGnome. Ngamanye amagama, uDebian ubeka iGnome njengoba abathuthukisi beletha, futhi kulapho umehluko ukule Mint, ukuthi okungenani basebenzisa isikhathi sabo benza imidwebo ekhangayo kumsebenzisi wokugcina.
Ukuzinza nokushesha kwe-Linux Mint esekwe ku-Debian kuyamangalisa, ngakho-ke ivoti lami ngele-Debian.
Kunesinye sezizathu zami ... 😀
Ingabe kulungile ukuvotela i-gentoo? hahaha Nah nakanjani uDebian unjengesihlahla se-oki.
Angikwazanga ukuvota ku-poll ... ngoba ayikho inketho ethi: "Angiyithandi iLinuxMint noma i-LMDE" ... LOL !!!
Kungenzeka yini ukuthi inhlolovo ayiyona eyabasebenzisi be-Arch? Kungani ingekho i-poll kwizithangami ze-Arch ethi: Ungathanda i-Arch noma i-LMDE?
IClaaro, Arch ayinamagatsha amabili futhi ayinaso isisekelo. Futhi noma ngubani oza kimi noCrux uzoba umphathi
Ungangixoshi, oh abalandeli be-Arch ne-Debian abazinikele ngoba ngiyabuthanda Ubuntu futhi ngiphawula nge-Windows.
Kwakungeke kungene emqondweni wami ukuthi usebenzisa Ubuntu
Ngiyamangala usho njalo, iqiniso
Wow kuze kube nini 😀
HAHAHA nah, ngiyazi ukuthi ningabalandeli be-Photoshop, ningitshele ngaphambili ukuthi aniyithandi iGimp ngakho-ke ngicabanga ukuthi iLinux + Wine + PS noma nje iWindows + PS yizinketho zakho 🙂
Ujabule uRena Renata 😉
Angisamthandi uRenata kakhulu. Uyi-troll, uyi-misanthropic, uyi-gnomera futhi uyasizonda isibindi, kepha (njalo a) usebenzisa Ubuntu ufff
Rena troll? mm angicabangi ... haha, futhi noma bekungenzeka, woza kuleyo troll eningi ukwedlula noma ngubani, empeleni ucishe wathatha isikhundla se-Official Troll No.1 kusuka Isibindi HAHA.
I-Misanthropic? Woza, uzongitshela ukuthi abantu bangumjaho ongcono futhi olunge kakhulu emhlabeni? ¬_¬… Ngeke ngisho lokho engikucabangayo ngoba lokhu akuyona ibhulogi / isayithi lezepolitiki, ngoba uma kunjalo, nginezibonelo eziningana engingakunika zona futhi ngikubonise ukuthi izingwejeje zingcono ngezindlela eziningi kunabantu.
Gnomera, yep sebenzisa iGnome, njengawe kunjalo?
FUTHI HAHAHAHA uyakuzonda Isibindi? HAHAHA Angazi, ngingathi akamzondi, vele (futhi yilokho engikucabangayo, ukuthi akudingeki kube yilokho akucabangayo ngempela) Angicabangi ukuthi ungcwele wokuzinikela kwakhe HAHAHAHA.
Empeleni ngicabanga ukuthi ubhale lokhu okungalungile, ngabe ubuqonde ukuthi:
Angisamthandi uRenata kakhulu. Uyi-troll, uyi-misanthropic, uyi-gnomera futhi uyasizonda isibindi, kepha (njalo kodwa) usebenzisa Ubuntu ufff
Futhi noma ngubani oneminwe emibili yesiphongo uzovumelana nami
Cha, ngabhala kahle, futhi ngangimthanda ngoba uyitroll, ungumuntu ongahambi kahle, uyi-gnomera futhi uyamzonda u-Courage futhi manje hhayi kangako ngoba usebenzisa i-gnome.
Angikaze ngasho noma nini ngiphikisana nama-misanthropes (ngoba ngikhona), noma ngokumelene nezibi, noma ngokumelene nama-troll 😀 futhi ngiyasizonda isitha sami ukushaya esikhundleni se-troll. Ngivele ngacabanga ukuthi icacile ekuphawuleni kwami ​​kwangaphambilini ukuthi angikuthandi kangako, ngokusebenzisa Ubuntu. (Uyazi i-buntus iyamunya), ngiqonde ukuthi, awuyibambi indlela yami yokuhlasela ukunyathelwa kobuntu.
Uphuzile ukubona okwangehlelayo ngoRenata, ngaphandle kwalokho kwakungekubi kangako futhi ngaxolisa kuye ngeposi. Futhi ngize ngacabanga ukuthi uyintombi yesihlabathi.
Ngendlela, akuvamile ukuthi awekho ama-ubuntosos lapha
HAHAHAHA akunjalo, ngivikela uRena noGabriela ngoba ngiyabazisa, bangabantu abahle kakhulu, kepha nentombi yami ayinjalo, ingasaphathwa eye-LOL !!
Kungenxa yokuthi abasebenzisi abaningi be-LMDE basifunda kunabasebenzisi be-LM-Ubuntu 🙂
Bekuvele kungicacele ngephesenti onginike lona namathuba wokuxhumana nabanye i-HAHAHA
Cewento !!!! ngoba isebenzisa ubuntu, hhayi ngoba isebenzisa i-gnome, kufanele ukuthi kuthi ngo-3 ekuseni ngibe ngingenalwazi oluphindwe kabili kunangezikhathi ezijwayelekile.
Ngikholwa ukuthi iLinuxMint ibinokunye kokufaneleka kwayo okukhulu, engeza amanye amathuluzi nokupholisha imininingwane ethile (yokusebenza nokubukeka) engekho ekufakweni okuzenzakalelayo kwe-Ubuntu, konke lokhu kucabanga ukunikeza isipiliyoni esingcono kumsebenzisi wokugcina.
Kodwa-ke, ngokufika kwe-Unity, nesinqumo se-LM sokungahambi ngaleyo ndlela, izinto sezibe nzima kuye. Angingabazi ukuthi ngesikhathi esifushane i-LMDE izoyeka ukuba elinye igatsha futhi ibe yinguqulo yayo eyinhloko. Ngakho-ke, nginombono wokuthi ucwaningo abalusungulile lufuna ukubheka ukuthi abasebenzisi bazosisekela yini leso sinqumo.
Uma ngikhumbula kahle ... futhi ngiwumuntu "wobuciko" (noma ngenza sengathi ngiyi-xD) UbuntuStudio izophinda iqothule Ubuntu ne-Unity yayo neGnome3 (engimbona kahle, mhlawumbe yimina ngedwa umuntu emhlabeni othanda zombili izinto ze-LOL) nabathuthukisi be-UbuntuStudio bazosekela uhlelo ngisho naku-Ubuntu, kepha nge-Xfce ... ngiyethemba, ukuba yiphupho elikude, ukuthi bazoyeka ukuthembela ku-Ubuntu futhi benze njalo ku-Debian (DebianStudio ... ngithanda umsindo we-xD ) noma ku-LMDE (MintStudio… yay: D)
Bengivele ngikushilo, ngenxa yedeskithophu angisiyena lo mpi no-Ubuntu (oh, kepha uthando lwami ngegundane elincane nokuthi ihle kangakanani ideskithophu ye-Xfce engangibamba futhi) Kepha ngaphandle kokungabaza, ngodumo (indlela engibona ngayo kunjalo) ukuthi iMint iwine ... kufanele nakanjani isuselwe ku-Debian futhi iphinde ikhulule ama-installers ngawo wonke ama-desktops njengoba bekujwayele (i-GNOME oyithandayo, i-Xfce, i-KDE, i-Flubox nokuthi kungani kungenjalo, ukubheja abanye noma unikeze inketho ukukhetha imvelo esiyifunayo ku-live-dvd, ngifuna ukucabanga ukuthi noma kuyisilo sama-gigabytes ama-4 nakunoma ngubani noma ukukushisa ku-dvd noma ukukufaka kwi-usb)
Kepha njengoba sengishilo, uGuajiro uphupha njengoba sisho lapha eMexico xD
Ngithanda le ntombazane ngokwengeziwe .. ngiyakutshela hahaha. Yebo, bheka wena, angibuthandi ubunye noma iGnome3, kepha ngiyalithanda igundane njengawe. Ngaze nganikezela nge-blog kuye ku-wordpress isikhashana esedlule.
Ngiphinde ngihlanganyele nomqondo wokuthi i-LM kufanele idlulele ku-Debian, noma ngabe kunjalo, ngiyaqiniseka ukuthi izolahlekelwa abasebenzisi abaningi abathanda Ubuntu kangcono kune-Ubuntu ...
Ngingathanda ukuthola amadiski okuqala kumsabalalisi, ngoba iMadrid ayizikhulisi izinhlelo ezindaweni noma ezindaweni zaseSpain. Bafuna sisebenzise iWindows nokunye okunjalo, ngakho-ke, amaseva we-linux avilapha kakhulu noma ayizinyonga. Futhi sinokungenzeki kwesoftware yamahhala kulo mphakathi okuthi, ngenxa yezizathu ezisobala, imali engenele ukuze siphile ngokuthobekile. Phakathi kukahulumeni waseSpain nalowo wase-Obahama, kubonakala sengathi umkhumbi wethu wokuhamba kwakuyijele.,….
Thatha ideskithophu yakho ku-.GIF nge-Byzanz